Midowga Yurub oo xeebaha Soomaaliya kasii ilaalin doona burcad-badeeda ilaa iyo dhammaadka 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMidowga Yurub oo xeebaha Soomaaliya kasii ilaalin doona burcad-badeeda ilaa iyo dhammaadka 2018
November 28, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Diyaarad ay leeyihiin Faransiiska oo dul heehaabaysa dooni looga shakiyay burcad-badeed. [Sawirka: AFP]
Garoowe-(Puntland Mirror) Midowga Yurub ayaa xeebaha Soomaaliya ka sii ilaalin doona burcad-badeeda labo sanno oo kale, sida ay sheegeen maanta oo Isniin ah.
NATO ayaa sheegtay asbuucii hore in ay dhammaysay howlgalkeedii Geeska Afrika iyaga oo u wareegay Badda Madow si ay uga hortagaan Ruushka iyo badda Mediterranean oo ay kusoo badanayaan dadka muhaajiriinta ah ee halkaas ka gudbaya.
Laakiin Midowga Yurub ayaa sheegay in ay kordhiyeen howlgalka EUNAVFOR ilaa iyo dabayaaqada sanadka 2018-ka.
Howlgalka oo ku ekaa dhammaadka 2016-ka, ayaa waxaa sida caadiga ah ka shaqeeya 1,200 qof, afar ilaa iyo lix Markab oo dagaal iyo saddex diyaaradood oo ay ku deeqeen dowladaha Midowga Yurub.
In ka badan 40 boqolkiiba maraakiibta qaada shidaalka iyo maraakiibta wada badeecada ee isaga kala goosha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa mara Gacanka Cadmeed iyo Badda Carabta.
April 3, 2017 Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay markab shixnada qaada oo laga leeyahay Hindiya
January 18, 2017 Qaramada Midoobay oo ka digtay in Soomaaaliya ay gaajo halis ugu jirto iyadoo ay sii xumaanayso abaartu
Puntland preparing to retake Qandala coastal town from ISIS